ထီပေါက်စဉ် Archives - Lodarya
ထီပေါက်ရင် ဘယ်လိုထုတ်ရမလည်းဆိုတာ ရှဲ လေး လုပ်ပေးချင်ပါတယ်
December 15, 2018 Lodar Ya 0
ထီပေါက်ရင် ဘယ်လိုထုတ်ရမလည်းဆိုတာ sharing လေး လုပ်ပေးချင်ပါတယ်။ ထီပေါက်ရင် ထီ ရုံးချုပ် ၃၇လမ်းမှာသွားထုတ်ရပါမယ်။ ဘာတွေထည့်သွားရမလည်းဆိုတော့ 1. အိမ်ထောင်စုစာရင်း မူရင်း နဲ့ မိတ္တူ 2. မှတ်ပုံတင်မူရင်း မိတ္တူ 3. ထီလက်မှတ် 4.ပတ်စပို့စ် ပုံ ၃ပုံ ( ၅သောင်းဆုဆိုရင်တော့ […]
16-9-2018 – ထိုင်းထီ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရန်
September 16, 2018 Lodar Ya 0
အားလုံးပဲ ကံထူးကံကောင်းကြပါစေ။ ထိုင်း ချဲထီ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကို အောက်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။ အောက်တွင်တိုက်ရိုက်ကြည့်ရန် Lodarya
(၁၈)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ထီပေါက်စဉ်
September 1, 2018 Lodar Ya 0
(၁၈)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ထီပေါက်စဉ် သိန်းတစ်သောင်း ဎ၉၉၃၈၄၀ သိန်းငါးထောင် သ ၇၇၈၁၉၂ ဋ္ဋ ၆၈၃၂၁၂ သိန်းသုံးထောင် ပ ၂၁၃၄၈၀ ယ ၈၆၉၁၈၂ သိန်းတစ်ထောင် ကဆ ၄၆၈၇၈၂ ထ ၄၂၃၇၈၃ ခ ၆၅၂၉၀၁ သ ၉၆၅၃၉၁ ဗ […]
16-8-2018 ထိုင်းထီ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရန်
August 16, 2018 Lodar Ya 0
၁၇ ကြိမ်မြောက် (၁.၈.၂၀၁၈) အောင်ဘာလေထီပေါက်စဉ်ပေါင်းချုပ်
August 1, 2018 Lodar Ya 0
၁၇ ကြိမ်မြောက် (၁.၈.၂၀၁၈) အောင်ဘာလေထီပေါက်စဉ်ပေါင်းချုပ် ကျပ်သိန်းတစ်သောင်း ဠ ၉၅၅၆၇၄ ကျပ်သိန်းငါးထောင် ခ ၆၅၁၀၈၈ ဆ ၃၂၆၇၇၂ ကျပ်သိန်းသုံးထောင် ဃ ၁၅၀၈၄၅ ဍ ၉၇၀၄၅၉ ကျပ်သိန်းတစ်ထောင် ကဇ ၈၀၉၉၉၅ ဝ ၂၂၃၃၃၇ ဂ ၇၃၅၅၇၀ ဆ […]
ထိုင်းသုံးလုံး ချဲထီ တိုက်ရိုက် LIVE
July 16, 2018 Lodar Ya 0
ထိုင်းသုံးလုံး ချဲထီ တိုက်ရိုက် LIVE ၁၆-၇-၂၀၁၈ ရက်နေ့ ထိုင်းသုံးလုံး ချဲထီ တိုက်ရိုက် ကြည့်ရူရန် အဆင်ပြေရာ linkတွင် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရူနိုင်ပါသည်။ ကံထူးကံကောင်းနိုင်ကြပါစေ။ Loto 3D King Fb live ကြည့်​ရန်​ Youtube Live ကြည့်​ရန်​
သိန်းတစ်ထောင်ဆု ဆွတ်ခူးသွားတဲ့ မြိတ်က မိသားစုတစ်စု…..
July 1, 2018 Lodar Ya 0
ယနေ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အောင်ဘာလေ ထီဖွင့်ပွဲမှာ မြိတ်က မိသားစုတစ်စုကတော့ သိန်းတစ်ထောင်ဆု တစ်ဆုကို ဆွတ်ခူးသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သိန်းတစ်ထောင် ငါးဆု ဖွင့်တဲ့အထဲက တစ်ဆုကို ဆွတ်ခူးသွားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပေါက်ဂဏန်းကတော့ ကဈ ၅၇၆၈၉ ၉ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မြိတ် မွေးဖြူရေးဇုံမှ ဦးဝင်းနိုင် ဒေါ်စုစုခိုင် […]
၁.၇.၂၀၁၈၊(၁၆)ကြိမ်​​မြောက်​ ​အောင်​ဘာ​လေ ထီ​ပေါက်​ဂဏန်းများ
၁.၇.၂၀၁၈၊(၁၆)ကြိမ်​​မြောက်​ ​အောင်​ဘာ​လေ ထီ​ပေါက်​ဂဏန်းများ (၁၆)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီပေါက်စဉ်ပေါင်းချုပ် (16)ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀၀ ဟ ၄၁၀၅၅၈ (16)ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း ၅၀၀၀ ဈ ၉၆၈၂၁၀ မိုးယံ ကျပ်သိန်း ၅၀၀၀ ကည ၂၉၀၈၅၃ (16)ကြိမ်မြောက် သိန်း ၃၀၀၀ ရ ၂၂၆၀၇၉ […]
( ၁၆ ) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီတိုက်လို့ ရပြီနော် ( 1 –6– 2018 )
ကဲ ထီတိုက်လို့ ရပြီနော် 😀 ( 1 –6– 2018 ) ( ၁၆ ) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေသိန်းထီဖွင့်ပွဲ 🍀 ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀၀ ဆုကြီး ဟ ၄၁၀၅၅၈ 🍀 ကျပ်သိန်း ၅၀၀၀ […]
June 16, 2018 Lodar Ya 0
၁၆-၆-၂၀၁၈ ရက်နေ့ ထိုင်းသုံးလုံး ချဲထီ တိုက်ရိုက် ကြည့်ရူရန် ﻿ အဆင်ပြေရာ linkများတွင် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရူနိုင်ပါသည်။ ကံထူးကံကောင်းနိုင်ကြပါစေ။ ﻿